गफ गाफ Archives | Cinemax Nepal Tv
काठमाडौं । म्युजिक भिडियो बाट निर्देशनको अनुभव संगालि सकेका युवा निर्देशक निशान कस्यप अब चलचित्र ‘परीः उड्न देऊ’ मार्फत चलचित्र निर्देशनमा आउने भएका छन् । उनले नायक विपिन कार्की र नवनायिका सृष्टि खड्कालाई जोडी लिएर चलचित्र निर्माण गर्न…
डिजे मार्समेलोको बारेमा ‘डेजाभू क्लब’का सञ्चालकहरुको यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्ग स्थित विगत केही वर्षदेखि सफलता पूर्वक सञ्चालनमा रहेको 'डेजाभू लाउञ्ज' आजका मितिसम्म अनवरत रुपमा सञ्चालनमा रहेको सञ्चालकहरुले जनाएका छन् । बिहिबार लाउञ्जमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लाउञ्जका प्रवन्धक कृष्ण…
बलिउका सुपर स्टार सलमान खानले अबदेखि चलचित्र फ्लप भएपछि पैसा माग्न आउनेहरु सँग काम नगर्ने बताएका छन्। यसअघि २०१७ मा रिलिज भएको चलचित्र 'ट्यूबलाइट फ्लप भएको थियो। त्यसबेला डिस्ट्रीब्यूटर्स उनिसँग पैसा फिर्ता माग्न आएका थिए। सलमानले…
मुंबई। आलिया भट्ट र रणबिर कपुरको चर्चा यतिबेला चुलीएको छ। संचार माध्यममा आएका खबरहरुलाई मान्ने हो भने,यी दुई यतिबेला रिलेशनशिपमा छन्। यो बाहेक यी दुई चलचित्र ‘ब्रह्मास्त्र’को कारण पनि चर्चामा छन्। उक्त फिल्म मार्फत रणबीर कपुर र आलिया…
वलिउडका प्रख्यात निर्देशक सुवास घई तपोवनमा,ओशोको जीवनीमाथि फिल्म बनाउने तयारी
बलिउडका प्रख्यात निर्माता,निर्देशक तथा पटकथाकार एवम् निर्माता सुवास घईले काठमाडौंको नागार्जुनस्थित ओशो तपोवनको भ्रमण गरेका छन् । निर्देशक घईले ओशो तपोवनका संन्यासीहरुसँग करिब दुई घण्टाको समय बिताए । निर्देशक घईलाई ओशो तपोवनका सञ्चालक…
विपाशा बसु अस्पतालमा भर्ना
एजेन्सी। बलिउड नायिका विपाशा बसु मुम्बईको एक अस्पतालमा भर्ना भएकी छन्। उनले सोशल मिडिया मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको जानकारी दिएकी छन्। विपाशाले अस्पतालमा बाट आफ्नो फोटो समेत पोस्ट गरेकी छन्। इन्स्टाग्राममा शेयर गरिएको उक्त फोटोमा विपाशा फनी…
‘चलचित्र निर्माण र अभिनयलाइ एकसाथ अगाडि लैजान्छु’: पूजा शर्मा
चलचित्र ‘प्रेमगीत’मा काम गर्नु अगाडि नायिका पूजा शर्माले सफलता खासै देखेकी थिइनन् । तर, यो चलचित्रबाट उनी नायिकाको रुपमा उदाइन् । उनै पूजालाई असार ३० गतेबाट रिलिज भएको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ले निर्मात्रीको रुपमा पनि सफल बनाइदियो ।…
छोराहरुसँग खेल्दा रमाइलो लाग्छः संचिता लुइटेल
भगवानप्रति भरोसा राख्ने सञ्चिता असाध्यै थोरै समय फेसबुक चलाउने नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । उनै नायिकासँग गरेको टि-टकः बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ ? म बिहान ६ बजे उठिसकेको हुन्छु । उठेपछि के गर्नुहुन्छ ? नुवाइधुवाई सकेपछि एकछिन पूजा गर्छु…
प्राय म्युजिक भिडियोमा छोटा र पारदर्शी पोशाकमा प्रस्तुत हुने ज्योतिलाई पाँच आरोपः १. जवानी देखाएकै भरमा करिअर टिकाउनु भएको छ हैन ? यो बेकारको आरोप हो । मलाई नबुझ्नेहरुले पहिला पनि यसो भन्थे अहिले पनि भन्छन् । छोटो लुगा लगाउँदैमा जवानी…